Baidoa Media Center » Alshabaab oo ka hadashay hadalkii kasoo yeeray shalay Xisbul Islaam.
Alshabaab oo ka hadashay hadalkii kasoo yeeray shalay Xisbul Islaam.
September 25, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Ayada oo uu shalay sheegay Sheekh Maxamed Macalin oo horay u ahaa afhayeenkii ururkii Xisbul Islaam inuu ururkaasi dib uga laabtay midowgii uu horay ula midoobay Alshabaab ayaa waxaa maanta ka hadlay warna kasoo saaray hadalkaas afhayeenka guud ee howlgalada Xarakada Alshabaab Sheekh Cabdicasiis Abuu Muscab.
Sheekh Abuu Muscab waxa uu sheegay inay af iyo adinba ku difaacayaan midnimadii ay horay u gaareen mujaahidiinta isaga oo sidoo kalena sheegay in hadalka soo yeeray looga gol leeyahay in jagooyin iyo wax lamid ah looga helo dowlada cusub.
“Hore ayaa loo soo saaray qaraarkeena Siyaasadeed ee ku aadan midnimadii la gaaray oo la isku dayo in la xagal daaciyo ama ururo cusub la sameeyo, inaga oo ah ciidankana waxaan u diyaarsanahay in aan fulino qaraarkaas” ayuu yiri Sheekh Abuu Muscab.
HOOS KA DHEGAYSO HADALKA ABUU MUSCAB.